ဆာဟာရကန္တာရတိရိစ္ဆာန်များ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | 10/05/2022 17:00 | အာဖရိကတိုက်
ဆာဟာရသဲကန္တာရသည် ပူပြင်းသောနေ့များနှင့် အေးမြသောညများနှင့်အတူ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးသောကန္တာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် မည်သည့်အရာမျှ သို့မဟုတ် မည်သူမျှ မနေထိုင်နိုင်ဟု ထင်ရသော်လည်း၊ ဆာဟာရမှာ အသက်တွေအများကြီးရှိတယ်။
အသက်ကို ရှင်သန်စေသော ရေတစ်စက်မျှမရှိဟု စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည့် ၎င်း၏ သဲခုံတွင်၊ လက်တွေ့တွင် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားသည်- ဆာဟာရသည် အသက်ပြည့်လျှံနေပါသည်။ ၎င်း၏တိရစ္ဆာန်များသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရှေးအကျဆုံးမျိုးစိတ်များထဲမှ အချို့ဖြစ်ပြီး လုံးဝမလွယ်ကူသော နေထိုင်မှုအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် စီမံနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ကြည့်ရအောင် ဆာဟာရတိရစ္ဆာန်များ.
2 dromedary ကုလားအုတ်
6 မျောက်တွေကို စောင့်ကြည့်ပါ။
10 ဆာဟာရန် cheetah
11 fennec မြေခွေး
16 သွယ်လျသော မျောက်ဝံ
17 hyena တွေ့တယ်။
အဲဒါမျိုးပေါ့ ခြေထောက်ပြားသဲများကို ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်သော ခြေထောက်များ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါက ရှက်စရာကောင်းတယ်။ မျိုးသုဉ်းရန်အန္တရာယ် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုနှင့် လူသားတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ၎င်းတို့၏ နေထိုင်ရာနေရာများ ယိုယွင်းပျက်စီးလာသည့်အပြင် ၎င်းတို့၏အသားနှင့် အသားရေကို ရှာဖွေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များသည် ယခင်ကထက် သေးငယ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ခြေထောက်များကြောင့် ၎င်းတို့၏ သဘာဝ သားရဲများထံမှ လွတ်မြောက်ရန်မှာလည်း ခက်ခဲသည်။
ကုလားအုတ်နှင့် သဲကန္တာရ သည် တွဲလျက် ရှိပြီး dromedary, the နှစ်ကောင်ကုလားအုတ်Sahara ၏ ဂန္တဝင် ပို့စကတ်ဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်တွေက အဆီတွေကို ရေမဟုတ်ဘဲ အဆီတွေကို သိုလှောင်ထားတဲ့ နို့အုံတွေမှာ ရှိတယ်။ ကုလားအုတ်သည် ဆယ်မိနစ်အတွင်း ရေ 100 လီတာသောက်နိုင်သည်။
တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်၏။ အရမ်းယဉ်တယ်။သဲကန္တာရ၏ ကြီးကျယ်သော အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အလွန်အားကောင်းပြီး ရေ သို့မဟုတ် အစာမပါဘဲ ကီလိုမီတာများစွာ သွားလာနိုင်သောကြောင့် အများအပြား အသုံးပြုကြသည်။ ကမ္ဘာပေါ်က လူသားရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း နေကောင်းလား
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် gazelles အားလုံး၏အဖြစ်အများဆုံးမျိုးစိတ်: အရပ် 65 စင်တီမီတာရှိပြီး အလေးချိန် ပေါင် 50 ခန့်ရှိသည်။ ရရှိသောအခြားအမည်မှာ "Ariel ဒရယ်". ၎င်းတို့သည် ချုံပုတ်များနှင့် သစ်ပင်များမှ အရွက်များကို စားသော သက်သတ်လွတ်တိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့ သားရဲကောင်တွေကို တွေ့တဲ့အခါ ခုန်ချတာကို မင်းမြင်ဖူးလား။ ၎င်းတို့သည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏အဆိုအရ ၎င်းတို့သည် အခြေအနေကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏အသက်တာ၏ နွားသတ်ပွဲသို့ ဝင်တိုက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့အား ပြသရန် ၎င်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့မှာ သတ္တိရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် အရမ်းခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ မျိုးစိတ်တစ်ခုပါ။
အဲဒါပါပဲ အများကြီး ဝမ်းသွားတတ်တဲ့ အနက်ရောင်ပိုးလေးတွေ အခြားတိရိစ္ဆာန်များ ကျန်ရစ်သမျှကို ကျွေးမွေးသည်။ သုံးမျိုးတို့ကို ရေတွက်၍ တစ်မျိုး၊ ဗိုက်ခေါက်ဘောလုံးများတွင်းတူးသူနှင့် ပျင်းရိပြီး ချောင်းထဲတွင်သာ နေထိုင်သည်။
ဤ eschatological ထုံးတမ်း, ဆွံ့အဘောလုံးလုပ်ခြင်း, မျိုးစိတ်များ၏အထီးများကပိုနှစ်သက်သည်။ မိန်းမတွေက တွင်းတူးပြီး အထဲမှာ နေနေကြတာ။
၎င်းတို့ကို သဲမြွေဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ အရှည် 50 စင်တီမီတာအထိကြီးထွားသည်။။ သာ မင်း သူတို့ကို ညမှာတွေ့တယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် နေ့အချိန်တွင် သဲထဲတွင် မြှုပ်နှံကြသည်။ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဆိပ်ရှိသောမြွေများ အရေပြားကို ပျက်စီးစေတယ်၊ ​​ဆဲလ်တွေကို ဖျက်ဆီးပြီး အဆိပ်အတောက်တွေ အများကြီးထွက်လာနိုင်တယ်။
ချိုမြွေသည် ယနေ့ခေတ်တွင် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးမျိုးစိတ်များ အဓိကကတော့ သူတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးယိုယွင်းမှု ကြောင့်ပါ။ သူတို့မျက်လုံးတွေမှာ ချိုတွေ ဘာကြောင့် ပေါက်နေလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ သေချာမသိပေမယ့် သဲတွေကနေ ကာကွယ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဖြတ်သန်းသွားလာဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဖုံးကွယ်ဖို့ပဲ...
အဲဒါ တွားသွားသတ္တဝါပါ။ အလွန်အဆိပ်ပြင်းသည်။သွေးအေးသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သူတို့သည် ပူအိုက်စပ်စပ်တွင် နေထိုင်ကြပြီး အေးလာသောအခါတွင် မမြင်ရတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ပုတ်သင်ညိုသည် အခြေခံအားဖြင့် တိုက်ခိုက်ရေးယန္တရားမရှိသောကြောင့် အအေးမိသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် အလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ပြင်းထန်လာပါသည်။
စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အိမ်မြှောင်တွေက ဘာစားလဲ။ ကြွက်၊ နို့တိုက်သတ္တဝါများ သို့မဟုတ် အင်းဆက်ပိုးမွှားများကဲ့သို့သော တိရစ္ဆာန်ငယ်များကို စားသုံးကြသည်။ တွေ့နိုင်သမျှ။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အဆိပ်ရှိသော အင်းဆက် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏လက်နက်များကို နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဖြင့် အသုံးပြုကြသည်- ၎င်းတို့၏ ရှည်လျားသော နံဇာများဖြင့် ၎င်းတို့၏ ပြိုင်ဘက်များကို နာကျင်စေကြပြီး အထူးသဖြင့် အနက်ရောင်ထိပ်ဖျားရှိသည့် ၎င်းတို့၏ သေးငယ်သော သန်မာသော ဇာများဖြင့် ၎င်းတို့သည် အဆိပ်ကို ထိုးသွင်းကြသည်။
ဤအဆိပ်တွင် neurotoxins ပါ၀င်ပြီး နာကျင်မှုများစွာကို ထုတ်ပေးသည်။ အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် အန္တရာယ်များနိုင်သောကြောင့် ဂရုတစိုက် နင်းပါ။ အဆိုးဆုံးကတော့ သူတို့ကို စျေးရောင်းပြီး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေအဖြစ် ရောင်းတဲ့ လူတွေရှိတယ်။
မပျံသန်းတဲ့ငှက်၊ သနားစရာ။ ဒီလိုပဲ အမြဲလိုလို သူမကို အမြဲတွေးနေပေမယ့် တကယ်တော့ သူမရဲ့ ပျံသန်းနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းက သူ့အတွက် ကောင်းမွန်စေပါတယ် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငှက်ကုလားအုတ်တစ်ကောင်သည် ကြီးမားသော်လည်း တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၄၀ ပြေးနိုင်သည်။
ဆာဟာရ သဲကန္တာရထဲမှာ ငှက်ကုလားအုတ်မျိုးစိတ် အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။ ဧရာမဥများ ရှည်လျားသော ခြေသလုံးများတွင် ခြေချောင်းနှစ်ချောင်းပါရှိပြီး ခရီးဝေးလမ်းလျှောက်ရာတွင် ကောင်းမွန်သည်။ ဒီခြေထောက်တွေက အရမ်းသန်မာပြီး ရိုက်လို့ရတယ်။ စူပါကန်ဘောများ၎င်းတို့တွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော မြင်ကွင်းနှင့် ထူးထူးခြားခြား ကြားနာမှုတစ်ခုရှိကြောင်း ယင်းအချက်က ထပ်လောင်းပြောသည်။
ကန္တာရငှက်ကုလားအုပ်များသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ရေအရင်းအမြစ်မှ ဝေးဝေးမသွားဘဲ ၎င်းတို့ကို ဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုပါက အနီးနားတွင် သားရဲကောင်များ ရှိနေသည်ကို သတိထားပါ။ ဘာစားကြလဲ? ပေါက်ပင်တွေ မြက်တွေ အကောင်သေးသေးလေးတွေ ပါတတ်ပါတယ်။
၎င်းတို့သည် အလွန်အစွမ်းထက်သော တောခွေးများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ သားကောင်များကို လိုက်ဖမ်းသည့်အခါတွင် အလွန်ဇွဲရှိကြပြီး နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့ရောက်ရှိသောအခါတွင် ၎င်းတို့သည် ဝမ်းပျက်သွားကြသည်။ ခွေးများသည် တောင်ဘက်နှင့် သဲကန္တာရအလယ်ဗဟိုရှိ ဆာဗားနားများတွင် နေထိုင်ကြသည်။ အထီးကျန်နွားများ
ထိုသို့ခန့်မှန်း အမဲလိုက်ခြင်းစတင်သောအခါ ၎င်းတို့၏အောင်မြင်မှုနှုန်းသည် 80% ကျော်၊Serengeti တွင် 90% ၊ ခြင်္သေ့များ၏အောင်မြင်မှုမှာ 30% ဖြစ်သည်။ သူတို့က အလွန်အောင်မြင်တယ်။ ဒါမှမလုံလောက်ရင် သားကောင်ကိုသတ်ပြီး ခွေးဟောင်းတွေနဲ့ ခွေးပေါက်လေးတွေကို အရင်ကျွေးခိုင်းတယ်။
ဒီတိရိစ္ဆာန်များ ၎င်းတို့သည် မျိုးသုဉ်းလုဆဲဆဲဖြစ်သည်။ဆာဟာရအလယ်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းနှင့် ဆူဒန်၏ ဆာဗားနားတွင် တိရစ္ဆာန် ၂၅၀ ခန့် ကျန်ရှိနေသည်။ အခြား cheetah များနှင့်မတူဘဲ ဤမျိုးစိတ်ခွဲများသည် သေးငယ်သည်၊ အင်္ကျီအရောင်အနည်းငယ်ရှိပြီး တိုသည်။
ဆာဟာရသဲကန္တာရထဲက ကျားသစ်တွေ ညဘက်ဆို ပိုကောင်းတယ်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၏ အပူရှိန်ကြောင့် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သားကောင်၏သွေးကို သောက်သောကြောင့် သူတို့ဝမ်းကွဲဝမ်းကွဲများထက် အသက်ပိုရှည်နိုင်သည်။
Fanak အာရဗီလို fox လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက် ဒီမြေခွေးလေးရဲ့ နာမည်က နည်းနည်းတော့ မလိုတော့ဘူး။ မြေခွေး သေးငယ်တယ်ဝံပုလွေများ၊ မြေခွေးများနှင့် ခွေးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မိသားစုတွင် အသေးငယ်ဆုံးခွေးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အလွန်ပေါ့ပါးသော အမွေးများရှိပြီး နေရောင်ခြည်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် ကူညီပေးသည်။
ဒီမြေခွေး သဲကန္တာရနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကျောက်ကပ်များရှိသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ တစ်ခုရှိသည် အနံ့ခံအာရုံနှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော အကြားအာရုံ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အခြေခံအားဖြင့် နားထောင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ သားကောင်ကို ခြေရာခံသည်။ ငှက်ငယ်များနှင့် ဥများကို ရှာဖွေရာတွင်လည်း သစ်ပင်တက်နိုင်သည်။
ကြွက်သည် ကြမ်းတမ်းသော သဲကန္တာရတွင် နေထိုင်ရန် အလွန်အဆင်ပြေသော ကြွက်ဖြစ်သည်။ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ခုန်ပြီး ပြေးနိုင်တယ်။ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ဆက်လက်ရှင်သန်ပြီး ၎င်း၏သားကောင်များထံမှ လွတ်မြောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ အစားအသောက်များတွင် အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၊ အပင်များနှင့် အစေ့များပါ၀င်ပြီး ၎င်းတို့သည်လည်း ရေဓာတ်ရရှိစေသည်။
၎င်းသည် ဆာဟာရတောင်တန်းဒေသများတွင်လည်း တွေ့မြင်ရသော အာဖရိကမျိုးစိတ်ဖြစ်သည်။ အကွာအဝေးမှ အနည်းငယ် မီးခိုးရောင်ရှိသော်လည်း အနီးကပ်တွင် အရောင်စုံရှိသည်။
အထီးများသည် အမျိူးသမီးများထက် ပိုကြီးပြီး သဲကန္တာရထဲတွင် အရာအားလုံး၊ အပင်များနှင့် တိရိစ္ဆာန်ငယ်များကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ရှင်သန်ကြသည်။
၎င်းသည် bustard မိသားစု၏မျိုးစိတ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါ ငှက်တစ်ကောင်ပဲ။ အင်းဆက်များကို ဦးစားပေးကျွေးသည်။အရမ်းဗိုက်ဆာနေပေမယ့် အစေ့တွေကို စားနိုင်ပါတယ်။ နေထိုင်ရာ ဆုံးရှုံးခြင်းဆိုသည်မှာ ဤမျိုးစိတ်များ၏ အင်္ဂါများ နည်းပါးလာပြီး နည်းပါးလာခြင်းကြောင့် မျိုးသုဉ်းရန် အန္တရာယ်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။
၎င်းသည် ခြိမ်းချောက်ခံရ၍ ပေါက်လာသည်ဟု ခံစားရသောအခါ လေဖြတ်သွားသည့် ဖြူကောင်ငယ်ဖြစ်ပြီး နေရာတိုင်းတွင် ထိုးမိသောကြောင့် ဖမ်းရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ အဲ့ဒါစားလား? အင်းဆက်များ၊ ဥများနှင့် အပင်များ။
အနက်ရောင် မျောက်ဝံ။ အိမ်မြှောင်များ၊ ကြွက်များ၊ ငှက်များနှင့် မြွေများကိုလည်း စားသော်လည်း အင်းဆက်များကို ကျက်စားသည်။ ထို့အတူ အဆိပ်ရှိတဲ့မြွေတွေကို သတ်နိုင်တယ်။ဒါပေမယ့် တကယ်ပဲ ခြိမ်းချောက်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။
ဒီမွန်ငုပ်ဟာ သာမန်မျောက်ဝံတွေထက် သစ်ပင်တက်နိုင်တဲ့အတွက် ငှက်တွေအများကြီးစားပါတယ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် "ပြုံးနေတဲ့ hyena". မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးအချိန်မဟုတ်သေးသော်လည်း ၎င်း၏အရေအတွက်သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကျဆင်းလာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ကို ဆုံးရှုံးသွားသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ အခြား hyena မျိုးစိတ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက hyena သည် အသက်ကြီးလာသောအခါတွင် အရောင်ပြောင်းသော်လည်း ၎င်း၏ အစက်အပြောက်များ ပေါ်လာပါသည်။
အပြောက် hyena သည် ၎င်း၏သားကောင်ကို လိုက်ရှာသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာဖရိကတိုက် » ဆာဟာရကန္တာရတိရိစ္ဆာန်များ